Uri Kuteerera Here? | Martech Zone
China, January 30, 2014 Svondo, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Wakambotora nguva here kuti usvike kune chiratidzo kana kambani pamhepo kuti umhan'are nyaya yebasa revatengi kana nyaya ine chigadzirwa kana sevhisi?
Wati wamboora mwoyo here apo iyo mhando kana kambani yakangosapindura kuchikumbiro chako? Chikumbiro chawakatora nguva kuita?
Ngatizvitarisei izvi - tese takabatikana uye hupenyu hunopinda munzira yemagariro enhau dzimwe nguva. Asi iri zvakare [mamwe e] mabasa edu kuve nemhosva yekupindura kune yega uye yega (zvine musoro & zvechokwadi) chikumbiro pama brand 'social media network edu. Kune vazhinji veshamwari dzangu dzekutengesa, ivo vanobva vaenda kune vezvenhau sosi kunotaura dambudziko ravakasangana naro nechiratidzo. Kana vasina kuwana mhinduro kana mhinduro, inguva yekutanga kufunga nezvekuchinja mabhureki. Munyika yevatengesi vakawanda uye mamwe mabhureki, iyi njodzi ine njodzi kumakambani ari kutora.
Zvakare, kune rimwe divi remari: vamwe vanhu vanotaura mabhurani online, asi havazomaki iyo brand kuti kambani isaziviswe kuti mumwe munhu akanyunyuta nezvavo. Izvi zvinogona kungova nenjodzi sekusapindura. Kune akawanda akarasika mikana kana iwe usinga zive kana yako brand ichitaurwa kana isiri kuteedzera iyo data.
Nzira dzaungagadzirise kuterera kwenzanga
Seta zviyeuchidzo zveako brand kiyi mazwi - Usango tarira pasocial media network kuti ikuudze iwe kana mumwe munhu ataura nezvako; ita chokwadi cheku gadzira Google Alert yezvakakodzera mazwi (zita rekambani, zita rekambani zita, zvigadzirwa zvekambani, nezvimwewo) kana kuteedzera mazwi akakosha uchishandisaHootsuite .
Gadza tarisiro yekuti uchavepo kupindura zvikumbiro - Dzimwe nguva, vanhu vanogumbuka kana iwe ukasapindura nenzira yakakodzera. Yakawandisa nguva, vanhu vanogona kufunga kuti mabrand anogara aripo kune ehupfumi midhiya mhinduro. Icho hachisi chokwadi nguva dzose. @VistaPrintHelp inoita basa rakanaka rekumisikidza izvi zvinotarisirwa. Ivo vanopa nguva nemazuva ayo ivo vachave varipo kuti vapindure kune zvikumbiro:
Govera chirongwa B - Kana iwe usina 24 awa yemagariro media rutsigiro, saka iva nechibvumirano chinowanikwa neruzivo rwekuonana iro vanhu vanogona kushandisa kusvika kune yako kambani chero nguva. Ndingakurudzira kuve neemail (kana fomu), foni, kana chat system.
Tora dambudziko kunze kwenyika - Paunenge uchiteerera mukati, kana ukasangana nemutengi akatsamwa, edza kutora mutengi kusagadzikana. Kukupa iwe nhamba yefoni kana email iyo iwe yaunogona kusvikwa, wobva watanga nhaurwa yekuti ungabatsira sei. Kana dambudziko ragadziriswa, unogona kutumira pachena kuti wakagadzirisa sei dambudziko uye wobvunza mutengi kana vakagutsikana. Kuve uripo nekuziva zviri kutaurwa pamusoro pechiratidzo chako chinhu chakakosha. Ichatungamira kune vanofara vatengi (kunyangwe kana vasina mufaro kwechinguva), uye mari hombe.
Tags: Mabatiro evatengimbirikirokutarisana nevanhuevanhu vezvenhaukuongorora kwevanhuvistaprint